Qaramada Midoobay: Dagaalka Yemen wuu sii xoogeystay - BBC News Somali
14 Agoosto 2017
Image caption In ka badan 99% qof oo heli kara adeegyo caafimaad ayaa ka badbaadaya cudurka
Warbixin ay Qaramada Midoobay soo saartay ayaa lagu sheegay in dagaalka dalka Yemen uu sii xoogeystay. Waxay warbixintu xustay in tirada weerarrada diyaaradeed ee lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkan ay ka bateen dhammaan weerarradii dhacay sanadkii 2016.
Isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo - oo reer-galbeedku ay hubeeyaan—ayaa taageera dowladda Yemen, waxayna weerarro dhanka cirka ah ku qaadaan mucaaradka. Mareykanka ayaa sidoo kale beegsada dagaal-yahannada al-Qaacidda ee koofurta Yemen. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay kumannaan qof wuxuuna yeeshay saameyn ba`an. Waxaa jirta khatar ah in macluuli ay dhacdo.
Dhanka kale, tirada kiisaska looga shakisan yahay cudurka daacuunka ee dalkaasi ayaa gaartay 500,000, sida ay sheegeyso Hay`adda Caafimaadka Aduunka (WHO).
Ugu yaraan 1,975 oo qof ayaa dhintay tan iyo intii cudurka biyaha ka dhasha uu ku faafay dalkaasi dhammaadkii bishii April. Cudurka ayaa si aad ah u fiday sababo la xiriira nadaafad-darro ka dhalatay biyo la`aan ka jirta qaybo badan oo dalkaasi ka mid ah.
In ka badan 14 milyan oo qof ayaan heysan biyo nadiif ah iyo faya-dhowr dalkaasi Yemen, khashinkana sidii hore loogama guro magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi.